Aprily 25, 2022 Janoary 24, 2022 by Reyan Ahmad
Hotspot Shield Free VPN Proxy Apk manafina ny adiresy IP anao ary manome fidirana amin'ny tranonkala rehetra. Azonao atao ny miditra amin'ny tranokala sy fampiharana voasakana amin'ny alàlan'ity rindranasa Android ity. Manome fifandraisana azo antoka sy azo antoka izy io, ahafahanao mivezivezy amin'ny Internet soa aman-tsara.
Izy io dia rindranasa Android, izay manolotra fiasa marobe maimaim-poana. Misy ihany koa ny fiasa premium, hotononinay ny momba an'ity fampiharana ity. Ka mijanona miaraka aminay, raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao.
Topimaso momba ny Hotspot Shield Free VPN Proxy Apk
Izy io dia rindrambaiko Android maimaim-poana, izay novolavolain'ny Hotspot Shield. Manome anao fidirana azo antoka amin'ny Internet. Alohan'ny hahafantarantsika, inona no azontsika atao amin'ny fampiharana ity? Tokony ho fantatsika hoe raha tsy mampiasa an'ity fampiharana ity isika? Noho izany dia mizara izany rehetra izany izahay amin'ireo andalana etsy ambany.
Araka ny fantatrao ankehitriny dia mifandray amin'ny Internet ny tsirairay. Zavatra tsara ny mizara ny hevitrao, eritreritra, eritreritra, traikefa, fahalalana, mombamomba anao manokana, ary mpiasa hafa. Saingy azo antoka amin'ny fitaovanao ve izy ireo rehefa mifandray amin'ny Internet?
Betsaka ny mpijirika miandry ny angon-drakitrao manokana sy ofisialy. Betsaka ny vohikala miandry anao hampiditra ny mombamomba anao manokana na amin'ny tsindry iray monja dia manome azy ireo ny fidirana feno amin'ny fitaovanao.
Ho an'ireo olana rehetra ireo, ity VPN no vahaolana. Mila mametraka ity fampiharana ity amin'ny fitaovanao fotsiny ianao dia hanana teknolojia VPN (Virtual Private Network). Hamorona famantarana virtoaly ho an'ny fitaovanao izany ary tsy hisy hahita ny toerana misy anao.
Amin'ny fampiasana ny VPN dia azonao atao mihitsy aza ny miditra amin'ireo tranonkala voarara ao amin'ny faritra misy anao. Azonao atao ny manokatra ireo tranokala sy fampiharana.
Azonao atao koa ny mividy fonosana premium, ahazoana endrika misimisy kokoa. Azonao atao ny miditra manova ny toerana misy anao manerantany amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ireo endri-tsoratra premium fotsiny. Manolotra vola kely dia kely izy ireo hahazoana fahazoan-dàlana isam-bolana amin'ny $ 12.99 / volana ary famandrihana isan-taona amin'ny $ 7.99 / volana.
anarana Hotspot Shield VPN
Size 31.14 MB
Anaran'ny fonosana hotsotshield.android.vpn
Developer Pango GmbH
Kinova Android manohana kely indrindra Lollipop (5) - API haavo 21
Endri-javatra lehibe Hotspot Shield Free VPN Proxy Apk
Efa nanonona antsipiriany tamin'ny antsipiriany izahay, fa hizara ny hevi-dehibe sasany amin'ny teboka bala. Ka ho mora aminareo rehetra aho. azonao atao ny mizara ny zavatra niainanao aminay ao amin'ilay faritra maneho hevitra etsy ambany.
Ity ny lisitry ny fiasa
Milalao Internet azo antoka
Arovy ny fitaovana
Azo antoka ve ny mampiasa Hotspot Shield VPN Apk?
Eny, azo antoka ny fampiasana azy. Manome fiarovana izy io amin'ny Internet sy Internet. Mpiaro tsotra ny fitaovanao izy io.
Ara-dalàna ve ny fampiasana Hotspot Shield VPN Apk?
Eny, ara-dalàna izany, saingy rehefa ampiasanao ara-dalàna izy io. Raha nampiasainao tamin'ny asa tsy ara-dalàna ianao dia hahita olana ianao ary tsy tompon'andraikitra amin'izany izahay.
Ahoana ny fomba hisintonana ny rakitra Apk?
Araka ny nolazaiko anao, manome fidirana amin'ireo tranonkala tsy voarara amin'ny toerana manokana izy io ary manome fidirana amin'izy ireo. Noho izany dia tsy misy amin'ny tranokala hafa. Hizara rohy azo antoka sy miasa izahay. Mila mitendry an'io rohy io fotsiny ianao ary miandry segondra vitsy mandra-pisintona azy.
Ahoana ny fametrahana Hotspot Shield Free VPN Proxy Apk?
Tsotra be ny mametraka rakitra Apk an'ny antoko fahatelo. Mila manova safidy fiarovana fotsiny ianao ary afaka mametraka azy amin'ny fitaovanao. Hizara ny dingana fametrahana anao izahay. Araho fotsiny izy ireo mba hametahana tsara ny rakitra Apk.
Mandehana any amin'ny setting ary sokafy ny tontonana fiarovana
Fanamarihana amin'ny 'Loharano tsy fantatra'
Mandehana any amin'ny manager file ary sokafy ny fisintomana
Kitiho ny rakitra Apk ary safidio ny safidy fametrahana
(Andraso segondra vitsy mandra-pahavitan'ny fisintomana)
Hotspot Shield Free VPN Proxy Apk no ampinga P tsara indrindra hahazoana fidirana maimaimpoana amin'ireo tranonkala sy fampiharana voasakana. Manome fidirana maimaimpoana amin'ireo toerana fanovana koa izy io. Nampiasa azy ara-dalàna ary nahazo tombony tamin'ity fampiharana ity.
Aza mitsahatra mitsidika ny Website.
Mijanona ao an-trano Mijanona soa aman-tsara
Sokajy Apps, Tools Tags Hotspot Shield Free Proxy VPN, Hotspot Shield Free VPN Proxy Apk, Hotspot Shield Free VPN Proxy App, VPN Post Fikarohana
Lalao Guardian Mod Revo Apk Download Ho an'ny Android
BBX Fintech Apk Download ho an'ny Android 